Fiainana antoko : mitohy ny fankalazan’ny Tim ny tsingerintaony | NewsMada
Fiainana antoko : mitohy ny fankalazan’ny Tim ny tsingerintaony
Anjaran’ny any Vakinankaratra indray. Nitohy tao Antsirabe, omaly ny hetsika nanamarihan’ny antoko Tim ny faha-15 taony. Notanterahina tanaty efitrano izany ary nahazoana alalana amin’ny tompon’andraikitra.
Nomena toromarika sy fiofanana, tahaka ny mahazatra azy, ireo mpitarika sy mpikatroka eo anivon’ny Tim, tamin’izao fankalazana izao, ho an’ny faritra Vakinankaratra. Nitarika izany ny mpanorina ny antoko, Ravalomanana Marc. Tafiditra ao anatin’izany ny efa fiomanana ny hiatrehana ny fifidianana. Fa eo koa ny torolalala momba ny fanomezana aina indray ny antoko, miainga eny ifotony. Nahaliana ireo mpikambana izany ary nanehoan’izy ireo ny hetahetany sy ny faniriany koa, hanatsarana hatrany ny fiainana anatin’ny antoko. Nalalaka tamin’ny fanontaniana sy ny tolokevitra samihafa ny rehetra tamin’izany.
Nitondra ny hetahetany ny tanora
Tsy nijanona teo izany fa nihaona manokana amin’ireo tanora eo anivon’ny Tim any amin’ny faritra Vakinankaratra koa ny filoha nasionaly, nihaino ny hetahetan’izy ireo. Tampoka ho an’ny rehetra any an-toerana izany hetsika fanamarihana izany sy ny fahatongavan-dRavalomnana nefa vory lanona ireo mpikambana Tim.
Ankoatra izany, nijery ny foara “Vitrine Vakinankaratra”, iarahana amin’ireo mpandrahara ao Antsirabe ny mpanorina Tim. “Tsara hatrany ny hetsika tahaka izao satria ahafahana mifanakalo traikefa sy hevitra ary ahitana zava-baovao hatrany”, hoy ity mpandraharaha sady mpanao politika ity.
Fanampiana sy fanohanana ny tantsaha
Narahabaina manoloana ny mpikarakara ny hetsika noho ny maha zava-dehibe ny tahaka izao. “Tena manampy ny tantsaha ny tahaka izao. Ohatra, mahita masomboly na ambioka izy ireo… Mety mandalo fahasahiranana kely na be izy ireo nefa tokony hotohizana ny hetsika, tahaka izao, na misy aza ny tsy fahafaham-po”, hoy ihany izy.
Nialoha izany, niaraka amin’ireo mpino FJKM tamin’ny famaranana ny fihaonambe voalohany ny seha-pitaizana ao amin’ny Fifohazana ao Ambatolamy ny filohan’ny jobily fankalazana ny faha-50 taon’ity fiangonana ity. Notanterahina ny faran’ny volana aogositra teo izany. Hitohy any amin’ny faritra hafa indray ny hetsika fankalazana ny faha-15 taon’ny antoko Tim.